Akwụkwọ ahụike siri ike na Thermomix | 100 Ezi ntụziaka ma dị ụtọ
Akwụkwọ ahụike siri ike na Thermomix
Anyị na-ewetara gị ọhụrụ anyị ahụike esi nri maka Thermomix na a dum nhọrọ nke ike Ezi ntụziaka na ị nwere ike iji TM5, TM31 na TM21 gị sie nri. Anyị kwenyesiri ike na ịgbaso usoro nri dị mma na nke kwesịrị ekwesị ekwesịghị ịbụ ihe siri ike ma ọ bụ na-agwụ ike, anyị chọrọ iji akwụkwọ ngosi a gosipụta ya.
100 nri na-edozi ahụ siri ike: usoro 40 kacha mma nke blog, yana foto ọhụrụ, yana usoro nri 60 anaghị ebipụta
N'ime akwụkwọ a, ị ga-ahụ usoro ọdịnala ọdịnala, nke ndị ọzọ na-agbanwe agbanwe, nri ndị anaghị eri anụ na ụfọdụ akwụkwọ nri akwadoro maka ndị nwere allergies na ekweghị ibe nọrọ. Ha niile kwadoro ma zuru oke maka ndị chọrọ ịga n'ihu nri dị mma.
Zụta akwụkwọ nri anyị
Akwụkwọ ahụ Nwere ike ịzụta ya ozugbo site Amazon ma ọ ga-abịarute n’ụlọ gị n’ụbọchị ole na ole.
N'ezie, ị ga-ahụ ya n'ime ụlọ ahịa ọ bụla na Spain dị ka Fnac, Casa del libro, Corte Inglés ...
B BTA AKW --KWỌ - € 18,95